Madaxweyne Xasan: Turkiga wuxuu dagay maskaxda iyo quluubta Soomaalida - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Xasan: Turkiga wuxuu dagay maskaxda iyo quluubta Soomaalida
Muqdisho ( Caasimada Online) – Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysigii ugu horreeyey ee heer caalami ah siiyey Wakaaladda Wararka Turkey ee Anadol, ayaa sheegy in Turkiga uu taabtay quluubta shacabka Soomaaliyeed, maadaama uu saameyn muuqata ku leeyahay Soomaaliya.
Xasan ayaa 15-kii Bishan waxay xildhibaanada ku doorteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, isagoo ka guuleystay madaxweynaha xilka ka dagaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Sida aan sheegay shacabka Turkiga iyo dowladda Turkiga waxay saameyn weyn ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, taageerada Turkiga waxay taabatay quluubta iyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed, taageeradaasi waxay ahayd mid muuqata oo la taaban karo, waxayna badbaadisay naf badan oo Soomaaliyeed,” ayuu yiri madaxweynaha cusub oo magaalada Muqdisho kula hadlay wakaaladda Anadolu.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in Turkiga uu Soomaaliya siiyey taageero badan oo dhanka waxbarashada ah oo isugu jirto laga bilaabo dugsi sare illaa heer Jaamacad, wuxuuna taageeradaas ku sheegay inay tahay Ra’sulmaal.
Madaxweynaha la doortay Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in Turkiga uu tababaro heer sare ah siiyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya.
“Turkiga wuxuu soo saaray saraakiil tayo sare leh oo dhanka ammaanka ah, tababarka kuma eko kaliya Turkiga dhexdiisa, balse Soomaaliya gudaheeda ayuu tababar ku bixiyaa, wuxuu ciidamada siiyaa qalabka lagama maarmaanka u ah fulinta waxa ay kusoo barteen gudaha Turkiga,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu dambeyn yiri “Turkiga wuxuu boos weyn ku leeyahay quluubta Soomaalida.”